VaMafume Vodzoka paBasa Pachisarudzwa Makomiti Matsva muHarare
Meya weguta reHarare vaJacob Mafume
Makanzura eCitizens Coalition for Change muHarare ayo akasarudzwa musarudzo dzemaBy-elections anoti agadzirira kushandira vagari mushure mekupinzwa mumakomiti akasiyana siyana uye meya, VaJacob Mafume, vanoti makanzura aya achasangana munguva pfupi inotevera kuti asarudze masachigaro emakomiti awo.
VaMafume vaudza Studio 7 kuti basa rave kufamba mukanzuru yeHarare zvichitevera kupinda kwemakanzura mumakomiti akaita serinoona nezvebhajeti, mvura, kuburitswa kwemashoko, kutakurwa kwemarara nezvimwe.
Patavabvunza kuti zvavakaita zvichatambirwa nehurumende here, VaMafume avo vange vari kupota vachimbomiswa basa negurukota rezvematunhu, VaJuly Moyo, vati vakakunda nyaya yavo kumatare uye vave kuenderera mberi kuita basa ravakasarudzirwa nevagi vemuHarare.
VaDenford Ngadziore vekuWard 16 avo vapinda mukomiti inoona nezvevashandi pamwe nevanotengesa mumigwagwa vaudza Studio 7 kuti komiti yavo ichaita zvisungo zvekuti kanzuru isiyane nekurwisana nevanotengesa mumigwagwa.
Kanzura weWard 14, Amai Kudzai Kadzombe, avo vave nhengo yemakomiti anoona nezvekuburitswa kwemashoko nekomiti inoona nevashandi vati chinangwwa chavo kugadzirisa zvichemo zvevashandi vekanzuru kuti vashande vakafara.
Vatiwo vachaita kuti zvirongwa zvese zvekanzuru zvishambadzwe kuti vagari vese muguta vazive zvirongwa zvekanzuru yavo.
Mutungamiriri werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare, reHarare Residents Trust, VaPrecious Shumba, vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kana makanzura ave kushanda pamwe chete vachiti izvi ndizvo zvinotarisirwa nevagari vese.
Kurwisa kwemakanzura nekuti uyu anobva kubato ripi hazvina zvazvinobatsira guta.
Tabatawo vaine vakafanobata chigaro chameya VaStewart Mtizwa vebato reMDC-T inotungamirirwa naVaDouglas Mwonzora.
Hatina kukwanisa kutaura nevaive vakafanobata chigaro chameya weHarare, VaStewart Mtizwa kuti vanotsigira here chirongwa chaVaMafume sezvo vange vasiri kudair nhare mbozha yavo.
Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rematunhu, VaJuly Moyo kuti tinzwe didi ravo panyaya.
Kwemwedzi yakati kuti pange paine makakatanwa pakati pa VaMtizwa na VaMafume sezvo VaMafume vachimiswa pasi asi vachirwirisa nekukunda nyaya dzavo kumatare edzimhosva.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reCombined Harare Residents Association, VaReuben Akili, vati makakatanwa ari muHarare anokonzerwa nekuti mutemo wezvematunhu nemadhorobha unopa simba rakawandiswa kugurukota rezvematunhu kwete kuvagari.